अन्तत: यी मन्त्रालय पाउने भयो माओवादी केन्द्रले, को – को बन्दैछन् मन्त्री ? – GALAXY
अन्तत: यी मन्त्रालय पाउने भयो माओवादी केन्द्रले, को – को बन्दैछन् मन्त्री ?
काठमाडौँ सत्तारुढ गठबन्धनबीच मन्त्रालयको टुंगो लागेको छ । हाल दुईवटा मन्त्रालय सम्हालिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले अब तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने भएको छ ।
माओवादीबाट मन्त्री बन्नेहरुको नाम लगभग टुंगो लागिसकेको स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो । माओवादी पाउने चार मन्त्रालयमा देवेन्द्र पौडेल, अञ्जना बिसंखे र महेश्वर गहतराजको नाम चर्चामा छ ।
बाँकी एउटा मन्त्रालयमा प्रदेश १ बाट सुरेशकुमार राई, सुदन किराती, शिवकुमार मण्डल र अमनलाल मोदीमध्ये एकजना पर्न सक्ने वा यी नाम बाहेक सिन्धुलीबाट हरिबोल गजुरेल पनि पर्न सक्ने स्रोतले बतायो ।